Gabdhaha Laascaanood: “Somaliland afduub bay nagu haysaa, dil bay nagu hayaan … ha nala ka soo gaaro!” (daawo) – Radio Daljir
Gabdhaha Laascaanood: “Somaliland afduub bay nagu haysaa, dil bay nagu hayaan … ha nala ka soo gaaro!” (daawo)
Maajo 27, 2018 4:12 g 0
Muddaharaad ballaaran oo ay dhigeen haweenka Laascaanood ayaa maanta ka dhacay magaalada, waxaana si aan kalahar laheyn ay haweenka iyo gabdhuhu u muujiyeen sida ay uga soo horjeedaan maamulka Somaliland iyo siyaasaddiisa cabburinta shacabka reer Sool, ayaga oo ku dhawaaqaya halkudhigyo ay kamid yihiin “waxaan nahay Soomaali, waxaan nahay Puntland.”
Haweenka iyo gabdhaha Laascaanood oo babbinaya calanka Soomaaliya iyo waliba kan Puntland ayaa ka horyimid hanjabaadaha, caburinta, iyo xarigga lagu hayo shacabka Laascaanood, waxaana sidii uu u biloowdey dagaalka xoreynta gobolka Sool magaalada Laascaanood la soo dhoobay boolis laga soo daabulay magaalooyinka Burco iyo Hargeysa.
Hoos ka daawo mudaharaadka oo aan ka soo xiganey Puntland TV (PLTV).
DEG DEG: Shacabka Laascaanood oo lasoo baxay Calanka Puntland iyo banaan-bixii ugu weynaa oo maamulka S.Land looga soo horjeedo oo Laasaacnood ka dhacay.Faah faahinta: Mo Ina Gelle
Posted by Warbaahinta Dawladda Puntland PLTV on Sunday, May 27, 2018
Maqaalo Kale 245 Wararka 17312
Madaxweyne Farmaajo oo Xilki ka qaaday Guddoomiyaha Maxkamadda Sare ee dalka